यस्तो हुन्छ जापानमा 'होल बडि चेकअप' को प्रकृया | Nepali In Japan
Monday, May 16जापानबारे सबै कुरा
कथा अनि व्यथा
यस्तो हुन्छ जापानमा ‘होल बडि चेकअप’ को प्रकृया
केन्कोउ सिन्दान (健康診断) अर्थात स्वास्थ्य जाँच । जापानमा अधिकांशलाई श्रमका लागि तयार भएको सुनिश्चित गर्न नजिकैको क्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँचका लागि पठाइन्छ । कर्पोरेट अफिसहरुमा वार्षिक स्वास्थ्य जाँच साधारण कुरा हो र यसमा विदेशीको पनि सहभागिताको अपेक्षा गरिन्छ । तर यो सबै तपाइको रोजगारदातामा निर्भर हुने कुरा पनि हुन् । सबै कम्पनीहरुले नियमित स्वास्थ्य जाँच नगराउन पनि सक्छन् । यस्तोमा आफ्नै खर्चमा गर्न पनि सकिन्छ ।
स्वास्थ्य जाँच प्रकृया सामान्य प्रक्रिया भएपनि जापानी भाषा नआउनेका लागि भने यो केही कठिन भने हुन सक्छ । विशेषगरि रिपोर्ट के आयो, के कुरामा ध्यान दिने भन्नेजस्ता कुरा डाक्टरले भनेका आधारमा बुझिएन भने सही निर्देशन पालना गर्न सकिंदैन, यस्तोमा कोही साथीको सहयोग लिन सकिन्छ वा आफुलाई जापानी त्यति नआउने भएकाले सरल तरिकाले बुझाउन वा अंग्रेजीमा बताउनका लागि अनुरोध सम्म भने गर्न सक्नुपर्छ । डाक्टरले भनेका कुरा सबै नबुझे मोवाइलमा रेकर्ड गरेर ल्याएर जान्नेलाई उल्था गरिदिन भन्न पनि सकिन्छ । भाषाको अज्ञानता भएपनि नियमित तरिकाले स्वास्थ्य जाँच गराउनु भने पर्छ है ।
केन्कोउ सिन्दानमा निम्न जाँचहरु हुन्छन्
रक्तचापको परिक्षण मेशिनको प्रयोगबाट आफै. गर्न पनि सकिन्छ वा नर्सको सहायताले पनि गर्न सकिन्छ । यदि तपाइको रक्तचाप बढी आयो भने अर्को जाँच गरिन्छ । तनावले जाँचको परिणामलाई बढाउन सक्ने हुँदा तनावमुक्त भएर बस्नुपर्छ ।
छातीको एक्स–रे (rentogen/レントゲン検査)
यो छातीमा केही खराबी छ छैन हेर्नका लागि गरिन्छ । यसबेला तपाइलाई लगाइरहेको सर्ट फुकाल्न लगाइन्छ । यदि यसो गर्दा तपाइलाई केही असहज हुन्छ भने त्यहाँ उपलब्ध अर्को कपडा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मेशिनमा गएर लामो सास लिएर बस्न सकिन्छ ।
आँखा परिक्षण (shiryoku/視力)
यो परिक्षण तपाइको दृष्टि परिक्षण गर्नका लागि हो । जापानमा ठूलोबाट सानो हुँदै जाने टुक्रेका औंठीजस्तो आकारका अब्जेक्टहरु देखाउन सि चार्टको प्रयोग गरिन्छ । यसमा तपाइले नर्सलाई हरेक अब्जेक्ट टुक्राइ तल, माथि, दाँया वा बाँया कता छ भनेर भन्नुपर्छ ।
श्रवणशक्ति जाँच (chyouryoku/聴力)
यसमा तपाइको सुन्नेशक्तिको जाँच गरिन्छ । तपाइलाई हेड फोन लगाउन दिइन्छ र एउटा सानो बटन पनि दिइन्छ । यसमा केही बिपहरु सुन्न लगाइन्छ । तपाइले केही सुन्नेवित्तिकै बटन थिच्नुपर्छ ।
पिशाव जाँच (nyoukensa/尿検査)
एउटा कागजको कपमा पिशाव लिएर काउण्टरमा छोड्न जानुपर्छ ।
उचाइ/तौल जाँच (shinchyou/身長, taijyuu/体重)
यो त सामान्य जाँच भै नै हाल्यो । उपलब्ध मेसिनहरुमा यो नाप लिइन्छ ।
प्रायजसो यो परिक्षणको अन्तिम चरण हो जसमा चिकित्सकले एक अन्तिम र छिटो सरसर्ती जाँच गर्छ । यसमा स्टेथोस्कोप लगाएर जिब्रो र पेटको हल्का जाँच गरिन्छ ।
केही कम्पनीले रगत परिक्षण (ketsuekikensa/血液検査) का लागि पनि भन्न सक्छन् । रगत परिक्षण गर्नु केही समय अगाडिदेखि केही पनि खानु हुँदैन । जति जति उमेर बढ्दै गयो स्वास्थ्य परिक्षणको आवश्यकता पनि त्यति त्यति बढ्दै जान्छ । जापानमा ४० बर्ष भएपश्चात नियमित स्वास्थ्य जाँच एकदमै आवश्यक मानिन्छ ।
स्वास्थ्य परिक्षण गर्नका लागि कुनै कम्पनीमा रोजगाररत हुनैपर्छ भन्ने छैन । तर राज्य बिमा नीतिले त्यस्ता स्वास्थ्य जाँचको भरपाइ गर्दैन भन्ने चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ । बिमा नहुँदा यसको खर्च ५ हजार देखि १० हजार येन सम्म लाग्न सक्छ । कर्मचारीहरुले आफ्नो कम्पनीले तोकेकै क्लिनिकमा गएर उपचार गराउनुपर्छ भन्ने छैन । तपाइको आफुलाई सहज हुने फिजिसियनबाट पनि जाँच गराउन सक्नुहुन्छ ।
महानगर स्वास्थ्य जाँच भने प्रांय तपाइ बस्ने शहरले नै उपलब्ध गराउँछ । र तिनीहरु प्राय निःशुल्ध हुन्छन् । तपाई नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने उमेरसमूहमा पर्नुभयो भने सिटी अफिसले चिठी पठाउँछ । अथवा आफैले पनि गएर बुझ्न र स्वास्थ्य जाँचका लागि दर्ता हुन सकिन्छ तर सिटी अफिसले तय गरेका सिमित दायराहरुभित्र भने तपाई पर्नुपर्छ ।
Posted in जानकारी, स्वास्थ्य
Prevजापानमा विजनेश भिसा बनाउने योजना छ ? थाहा पाइराख्नुस् यि कुरा
Nextजापानमा पाइने एण्टि ड्याण्ड्रफ स्याप्पूबारे जानकारी
Nepali In Japan
जापानमा अनौठो बाल हेपाटाइटिसका बिरामी फेला
जापानी पासपोर्ट विश्वकै शक्तिशाली
जापानबारे सबैभन्दा धेरै सुनिने ५ कुधारणा
नियमित र करारका कर्मचारीबीच के भिन्नता छ ? करारको कर्मचारीका रुपमा काम गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
थप नेपाली कामदार लैजाने कोशिश गर्दै जापान
जापानले १०६ देशमाथिको प्रवेश प्रतिबन्ध खुलाउँदै, पयर्टकमाथिको प्रतिबन्ध यथावत
जापानको सर्वाधिक लोकप्रिय बियरआसाहीको सुपर ड्राइ
तोहोकु विश्वविद्यालय लगातार तेस्रो वर्ष पनि जापानको शीर्ष विश्वविद्यालय
यस्तो छ नेपाल स्थित जापानी दूतावासले भीएफएसको वेबसाइटमा बूकिङसम्बन्धी जारी गरेको जानकारी
जापानमा अप्रिलदेखि बढ्ने भयो खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य सामान